7w 15w 35w 35w 50w Elephant trunk na-alaghachi LED ìhè,Ọkụ Na-agbada ìhè,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - China 7w 15w 35w 35w 50w Elephant trunk na-alaghachi LED ìhè, Emepụta & ndozi
7w 15w 35w 35w 50w Elephant trunk na-alaghachi LED ìhè. Anyị na-enwu ọkụ ma ọ bụ na-enwu ọkụ (na-amụkwa ọkụ na English English, mgbe ụfọdụ ike ìhè (maka ịkụnye ọkụ) na American English) bụ ntanye ọkụ nke arụnyere n'ime oghere oghere n'ime ụlọ. Mgbe emechara ya, o yiri ka ìhè na-enwu site n'otu oghere dị n'elu ụlọ, tụkwasị ìhè dị n'okpuru ala dị ka nnukwu ogbu mmiri dị ukwuu ma ọ bụ ihe ngosi dị warara. Uzo nke ike nke oma di nma, Umu oku di elu nke n'eme ka ihu na anya. Ebube dị na gburugburu a dị nnọọ ike nke ọma na ogologo oge, na-enye ohere maka ego dị ukwuu na ego ike na ego nke nnọchi a gbanwere oriọna mgbe ọ na-enye nnukwu nsụgharị ọkụ. Ebube anyị na mgbidi anyị niile na-eduzi anyị.( 7w 15w 35w 35w 50w Elephant trunk na-alaghachi LED ìhè )
7w 15w 35w 35w 50w Elephant trunk na-alaghachi LED ìhè
©2005-2018 Karnar Kpọtụrụ anyị Map ebe Last modified: June 21 2019 04:07:15.